Hage rooting Tani waxaa kaliya loogu talagalay Samsung Galaxy Ace S5830i. Fadlan si taxadar leh loo hubiyo qalab aad ka hor inta aanad bilaabin ( rooting Galaxy Ace halkan S5830 ). Afjarno ka tirtiri doonaa damaanad telefoonka. Haddii aad doonaysid in aad sii afjarno telefoonka, waxaan qaadan in aad ogolaato inaad ka rujin telefoonka halis ugu adiga kuu gaar ah.
Tallaabada ugu hagitaan talaabo talaabo ah rooting Galaxy Ace S5830i
Si aan ku bilaabo, gurmad dhammaan faylasha iyo codsiyada ku saabsan telefoonka ugu horeysay, ka hortagga xogta laga badiyay.
1. Hubi batteriga ku saabsan telefoonka iyo in la hubiyo waa aan ka yarayn 70%, taas oo aad u balan qaado rooting ka buuxo.
2. Tag Settings> Codsiyada> Horumarinta> calaamadee sanduuqa ka hor Debugging USB . Talaabadan waa mid ikhtiyaari ah. Waxaad u boodi kartaa haddii aad karti debugging USB ka hor.
3. Download update-s5830i.zip iyo badbaadin on your computer sida shaqada diyaariyo. Ha isku dayin inaad u siibka ka dib markii duuban. Waxaad dhab ahaan ma u baahan tahay in.
4. in kombiyuutarka Connect qalab aad. Copy file ZIP aad soo bixi tallaabo hore si gal xidid kaarka SD ku saabsan telefoonka ah.
5. Ka dib markii dhajinta faylka, barkinta aad telefoon oo dami. Marka ay gebi ahaanba la bakhtiiyey, riix Volume Up + Power + Home badhamada waqti isku mid ah si ay u tagaan oo ay u soo kabashada hab.
6. menu hab dib u soo kabashada, waxaad isticmaali kartaa fure Volume ah in la doorto xulasho ah. Dooro Codso update ka card SD iyo dooran file ka soo dejisan ZIP in aad soo guuriyeen in folder asalka u ah kaarka SD ah.
7. sug daqiiqad. Markii geeddi-socodka la soo gabagabeeyo, xulo nidaamka reboot hadda in aad telefoon rebooted.
8. rebooting ayaa kuu qaadan doonaa xoogaa daqiiqo ah. Ka dib markii in, aad Samsung Galaxy Ace S5830i ayaa la rujin.
9. Haddii aad rabto in aad si aad u hubiso in aad telefoonka habaysan ama ma, waxaad tagi kartaa dukaanka Play Google si ay baaritaan ugu Root saxe. Ku rakib oo la furo ku saabsan telefoonka, waxaad ka heli doontaa in aad Galaxy Ace S5830i habaysan ama aan.
> Resource > Talooyin Root > Sida loo xididka Samsung Galaxy Ace S5830i